I-USA - ALinks
Uyifumana njani i-visa yaseMelika?
January 8, 2022 UMaitri Jha i-USA, ivisa
Uninzi lwabantu kwihlabathi liphela bafuna ukutyelela i-USA kube kanye ebomini. Elona nqaku libalulekileyo ekufakeni isicelo seVisa yaseMelika kukufumana itikiti lelizwe elithile olindwendwelayo. Umntu unokuba nezizathu ezahlukeneyo
Ungasifaka njani isicelo sokhuseleko eMelika?
January 8, 2022 UAntika Kumari ababaleki, i-USA
Nyaka ngamnye abantu beza e-US befuna ukhuseleko ngenxa yokuba baye batshutshiswa. Baya kuphathwa kakubi ngenxa: Ubulungu kwiqela elithile lentlalontle, iNkolo. Ukwenza isicelo se-Asylum okanye ukuKhuselwa e-US, kufuneka
Iibhanki eziphezulu eUnited States
January 7, 2022 UAntika Kumari imali, i-USA
Xa unikela ingqalelo ukuba ungayibeka phi imali yokugcina ngokukhuselekileyo, uluhlu lweenketho zebhanki lubonakala lungapheli. Amaziko amancinci ahlukeneyo endawo anokugcina imali oyifumene nzima. Kodwa ngenkonzo epheleleyo kunye nokufikelela kude kwebhanki, ezona bhanki zikhulu kazwelonke
Uphi iDisneyland? Zonke iiDisneyland kwihlabathi liphela
January 4, 2022 UKaruna Chandna izinto zokwenza, i-USA
Ukhenketho lweDisneyland luhlala lukhenketha lwamaphupha kubahambi rhoqo. Amava okutyelela i-6 eyahlukeneyo ye-Disneyland kwihlabathi jikelele kunye nokufumana ukuba i-Disneyland iphi sesinye isicwangciso esihle. Apha siza kuthetha ngee-2 ezinkulu zeDisneylands ezikhoyo
I-visa yethu yamaTshayina
Novemba 22, 2021 UAntika Kumari i-USA, ivisa
Umsebenzi wase-US e-China uyayiqonda into yokuba uninzi lwabafakizicelo be-visa bahlawule umrhumo wokufaka izicelo ze-visa. Kwaye balinde kuphela ukuba kuqeshwe i-visa. Qiniseka, okwangoku, ukuba i-mission yase-US iya kuyandisa
Ungawufumana njani umsebenzi eMelika? Isikhokelo esikhawulezayo sabasemzini kunye nabahlali baseMelika
Novemba 21, 2021 UMaitri Jha imisebenzi, i-USA
Uhlala uphupha ngokuza kuhlala kwaye usebenze eMelika. Ngelixa i-US inemithetho engqongqo yokufuduka, usenokulizalisekisa iphupha lakho ngomzamo kunye nomonde. Eyona ndlela ithandwayo yokwenza
Novemba 20, 2021 IShubham Sharma isikolo, i-USA
I-United States yaseMelika inabantu abaninzi. Inezinto ezingama-50 zizonke. I-USA lelona lizwe lingcono nelilungileyo ukuba lisebenze, njengoko inezona nkampani zibalaseleyo kwihlabathi. Ukuba umntu
Uyifumana njani i-visa evela eMexico ukuya eMelika?
Oktobha 10, 2021 IShubham Sharma Mekhsikho, i-USA, ivisa
Abahambi abavela eMexico abanqwenela ukutyelela iUnited States kufuneka bafumane i-visa kuqala. Ngaphambi kokuba kukhutshwe i-visa, kufuneka iye kwisicelo, amaxwebhu, kunye nenkqubo yodliwanondlebe. Ukongeza, amagama aqokelelwe kwaye ajongisiswe kwi
1 2 3 4 I zithuba ezilandelayo»